Vanhu Vanotii Nezvekudenga?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Digor Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Wakambozvibvunza here kuti kudenga kwakamboita sei uye kuti ndivanaani vanogarako? Kana wakambozvibvunza, ziva kuti hausi woga. Vanhu vava nemakore vachitaura zvakasiyana-siyana. Vamwe vanoti kudenga inzvimbo izere nemufaro inogarwa nengirozi uye ndiko kunoendwa nevanhu vakanaka kana vafa. Asiwo vamwe vanoti ndiko kunogara vanamwari vakasiyana-siyana.
Vanhu vakawanda vanoti hazviiti kuti tizive chokwadi nezveupenyu hwekudenga nekuti hapana akambobvako akataura zvakwakaita. Uku kunyepa, nekuti Jesu Kristu asati auya panyika aimbova kudenga. Paaiva panyika akaudza vatungamiriri vezvitendero kuti: “Handina kuburuka ndichibva kudenga kuzoita zvandinoda, asi zvinodiwa naiye akandituma.” Jesu akanga achitaura zvinhu zvaakanga aona paakaudza vadzidzi vake kuti: “Mumba maBaba vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara.”—Johani 6:38; 14:2.
Baba vaJesu vanonzi Jehovha, uye vanogara kudenga. (Pisarema 83:18) Kunze kwaJehovha Mwari naJesu Kristu hapana angakwanisa kunyatsotsanangura kuti kudenga kwakaita sei. Jehovha naJesu vakaita zvekurotsa vamwe vanhu vakatendeka kuti vaone zvakaita kudenga.
Nyaya inotevera inotaura nezvedzimwe ndima dziri muBhaibheri dzinotaura zvinhu zvakaonekwa nevamwe vacho. Paunenge uchidziverenga, yeuka kuti zvinhu zvekudenga zvakasiyana chaizvo nezvinhu zvatinoona kana kubata. Mwari akaita kuti zvakaonekwa izvi zvitsanangurwe nemashoko ari nyore atinokwanisa kunyatsonzwisisa. Zvavakaona zvichakubatsira kunzwisisa kuti ndivanaani vanogara ‘munzvimbo zhinji dzokugara’ dzekudenga.